အရိုးတွန်ချိန် ရောက်လာပြီလေ 8888 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » အရိုးတွန်ချိန် ရောက်လာပြီလေ 8888
အရိုးတွန်ချိန် ရောက်လာပြီလေ 8888
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 7, 2013 in Opinions & Discussion | 16 comments
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒီအချိန်က အာဏာရ မဆလပါတီ ယခု တစညပါတီ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဟန်ရွှေကို ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းကမေးတော့ ဒီလိုဖြေတယ်“ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ ကတိပေးပြီးသား ဖြစ်တယ်၊ ……. ……… လုပ်တဲ့အခါမှာ အခက်ခဲ ၂ ခု ကျော်လွှားရမှာက တခုကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ ကိုပြင်ရမှာ။… ………. အဲဒီတုန်းက ဥပဒေဆိုတာ လူက လုပ်တာပဲ၊ လူကပြင်ရင်ရတယ် ပြောတာပဲ။ မလိုဘူး၊ ကြားဖြတ်အစိုးရပဲ လိုတယ်လို့ ပုတ်ခတ် ပြောခဲ့ကြတယ်။ ……….. …. အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ အခု နမူနာပဲလေ။ အများကြီး ပေရှည်သွားတယ်။ …… အဲဒီလိုနဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ တပ်ကို အာဏာ လွှဲလိုက်ရတယ်။ ဖြေဆေးထိုး ပေမယ့် လူနာက လက်မခံနိုင်လို့ ဒီအဖြေ ဖြစ်သွားတာပဲ။” http://burma.irrawaddy.org/archives/45713
ဘယ်လောက် စော်ကားလိုက်တဲ့ စကားလဲ..။ စစ်အာဏာရှင်ခေတ် ဖိနှိပ်မှုလုပ်ရပ်တွေမှာ တာဝန်အရှိဆုံး နှစ်ဖွဲ့ဟာ မဆလပါတီ (တစည)နဲ့ စစ်တပ်တို့ပဲ။ ၁၉၈၈ စစ်အာဏာသိမ်းအပြီး မဆလကန တစညပြောင်းစဉ် မျက်နှာပြောင်တိုက် ယူသွားတဲ့ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးနဲ့ အခြားအခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်။ အခုအချိန်အထိ ဘယ်ကောင်မှ တောင်းပန်တဲ့စကား ထွက်မလာဘူး၊ ဆန္ဒခံယူပွဲ ဘာညာနဲ့တောင် ထိကပါးရိကပါး ဆိုတယ်။ ၂၀၀၈နာဂစ် အခြေခံဥပဒေ၊၂၀၁၀ ရွေးဂေါက်ပွဲရလဒ် လက်ခံပြီး လွှတ်တော်ထဲဝင် နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ ဘွားဒေါ်ဂျီးကို သက်သေထူလိုဟန်ရှိတယ်။ အဲတုံးကသာ ငါတို့ပြောစကား နားထောင်ရင် အခုလောက် ဖြစ်စရာမရှိဘူး၊ နောက်တော့လည်း ဒီလမ်းပဲ လိုက်ရတာပဲ မဟုတ်လားပေါ့။
ကျူးလွန်ခဲ့ကြသူများအဖို့ ပြည်ဖုံးကားချနိုင်ပေမဲ့ ခံရသူများကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့ပျောက်စရာ မရှိဘူး။ ထိခိုက်ခံစားမှုများကို ထိုက်တန်စွာ အသိအမှတ် ပေးရမယ်၊ နှစ်ဖက် ကာယကံရှင်များကနေ တောင်းပန်ခြင်း ကျေအေးခြင်းလုပ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ လုပ်တဲ့အခါလည်း အချိန်မနှောင်းခင် အားလုံး သက်ရှိထင်ရှားရှိခိုက် လုံလုံလောက်လောက် လုပ်ပေးရမယ်။ နို့မို့ဆို သေမှရင်ဘတ်စည်တီး ငိုတာထက် ထူးမယ်မထင်ဘူး။ ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆို လူသတ်ပွဲ တာဝန်ရှိတဲ့ ခမာနီခေါင်းဆောင်တွေကို ခုံရုံးတင်တော့ အကုန်လောက်နီးပါး သေကုန်ပြီ။ ပြောမဲ့သာပြောရ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလည်း ကမ္ဘောဒီးယားပုံစံ ဝင်နေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေ နေရာယူနေတာ တူသလို၊ တနေ့က ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း လက်ရှိဝံဂျီးချုပ် ဟွန်ဆန်ပဲ အနိုင်ရသွားသတဲ့..။ ဘွားဒေါ်ရေ ကြည့်လုပ် ကြည့်လုပ်…။
နေရာရသူများက အတိတ်မှာကျန် မနေဖို့ပြောတာ နားလည်ပေမဲ့ ခံစားရသူများရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးချက်ကို ပြန်ကြည့်ပေးရမယ်။ အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေး ခေါင်းစဉ်အောက်က အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်နေရာ ယူထားသူများ အတွက်တော့ သူများထက်ပိုတဲ့ မိမိက တာဝန်ယူ ဖြည့်ဆည်းပေးရမည့် ကတိကဝတ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားများ သူ့၊ကိုယ် လွှဲချ လေတွေဖောင်ရင်း သမိုင်းကွက်လပ်ဖြစ် ကျန်နေခဲ့မှာ စိုးလို့ပါ။
အရိုးတွန်ချိန် ရောက်လာပြီလေ၊ နိုင်ငံတော် လူသတ်မှုတွေ ရုံးတင်စစ်ဆေးပေး…
ဆိုပြီး လွဲပေးရင် ? ? ? ?
“ရလိမ့်မယ်လို့ မထင် ရလိမ့်မယ်လို့ မထင် ပြောတာ မောစရာပင်´´ ဆိုသလို ညစ်နည်းမျိုးစုံနဲ့ အသက်ဆက်ရေး အာဏာရပါတီအဖွဲ့က လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးကို သတိရမိတယ်။
တစ်စု က အရှေ့ဖက်ကို တွန်း
နောက်တစ်စုက အနောက်ဖက်ကို တွန်းကြရင် တော့
အရှေ့ကို ရွေ့မလား . . . . . အနောက်ကို ရွေ့မလား
လက်အံသေတဲ့ဖက်ကို ရွေ့မှာဘဲ . .
ဆေးထိုးသတ်မှာ လက်မခံလို့ သေနပ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်ရတယ်လို့ ဒဲ့ပြောရမှာ…
အရိုးဆွေးအောင် လုပ်နေကြတာမို့၊ အရိုးတွန်ဖို့တော့ သိပ်မနီးစပ်ဘူး…
ရင်ဘတ်စည်တီး အခန်းအနားကြီးတွေသာ နှစ်စဉ် ကျင်းပကြပါလို့…
ကိုယ့်ဖက်မှာ တကယ့် ( လက်နက် ) အင်အားမှ မရှိတော့လည်း ၊
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲကွယ် ။
ဒီလိုပဲ ချော့ချော့ခေါ် ၊ မျှောမျှောခေါ် နေရတာပါပဲ ။
အမှန်ဆို ၊ ဒေါ်စုလဲ မသိပဲနေမလားကွယ် ။
ဘယ်သူ့မှ သွား မေးနေစရာ ၊ ဘယ်သူ့စကားမှ ၊
သွား နားထောင်နေစရာတောင် မလိုပါဘူး ။
သူ့ဘေး ကပ်ရက်က ၊ NLD နာယက ကြီး ဦးဝင်းတင် ၊
ပြောနေတာတွေ ၊ နေ့ တဓူဝ တစ်ချိန်လုံး ကြားနေရတာပဲကွယ် ။
အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ဖက်မှာ ( လက်နက် ) အင်အားမှ မရှိတာပါပဲကွယ် ။
စစ်တပ်ကန်ထရိုက်ရထားတဲ့ ဩဇီလက်နက်ကုမ္မဏီ အကျိုးဆောင် ဦးဖောခင်ဗျား..
အဲဒီ လက်နက်ဆိုဒါကို ကြောက်သာပဲ… လက်နက်ရှိမှ ဖြစ်တယ် အတွေးဝင်သွားရင် (ခုလည်း ဝင်နေပါပြီ) ထစ်ခနဲဆို လက်နက်ပြေးကိုင်ကြမှာပဲ။ အဲဒီအကျိုးဆက် တိုင်းရင်းသား သူပုန်အဖွဲ့တွေမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆို မကျေနပ်တာနဲ့ မိခင်အဖွဲ့ကနေ ခွဲထွက် စင်ပြိုင်ထောင်တော့တာပဲ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်လက်ချက်တွေပေါ့ဗျာ။ ဒီအချိုးမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ လိုလားတဲ့ စားပွဲဝိုင်းထိုင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်း နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု ရေရှည်တည်တံ့ လာပါ့မလား…။
သေနတ်ပြောင်းနဲ့ ဗိုက်ကို ဆောင့်ထိုးခံရတာလေးတောင် နှစ်သုံးဆယ်ကြာတဲ့အထိနာတုန်း ထင်သေးရင်
ဒါ့ထက် အဆသိန်းသန်းမကတဲ့ အနာတွေ ဘယ်ပျောက်လိမ့်မလဲ ….
ဒါပေသိ ခဏ တော့ သည်းခံရမယ်ပေါ့…
အခြေအနေတွေ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အထိ ခဏတော့ သည်းခံရမယ်ပေါ့…။
“ခံစားရသူများရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးချက်ကို ပြန်ကြည့်ပေးရမယ်”
အခုပဲ နေရှင်နယ်ကွန်ဗင်းရှင်းဆင်တာမှာ ၈၈၈၈ငွေရတုပွဲ
တရားဝင်ကျင်းပရာမှာ ဓါတ်ပုံတွေ စာစောင်ဟောင်းတွေ
အတွေ့အကြုံပြန်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေ မြိုင်မြိုင်ကြီး ပြထားတာတွေ့ရတယ်
စစ်အစိုးရနဲ့ မဆလရဲ့ လက်ရာတွေအတွက်သက်သေတွေပဲ..
အခုပြပွဲကြောင့် အဲတုန်းကမသိမှီလိုက်တဲ့ ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ
ကိုယ်ရောင်ဖျောက်နေကြတဲ့ နှိပ်ကွပ်သူတရားခံ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေလည်း
ကျုပ်တော့ ဒီလိုပြပွဲကြီးမျိုးကျင်းပခွင့်ရတာ အားရမိတယ်ဗျ..
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုမျိုးခံချနိုင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့လည်းရှိနေရင် အပြစ်ရှိသူတွေကို စစ်ခုံရုံးတင်တာတော့ မြင်ချင်တယ်…
အတိတ်ကာလက ပြည်သူများ မည်သို့ပေးဆပ်၊ ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်ကို သိရှိမှသာ အနာဂတ်ကို တန်ဖိုးထား ဖော်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့သည် ပစ္စုပ္ပန်၌ ရပ်တည်လျက် အတိတ်ကာလမှ ပြည်သူများ မည်သို့ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်ကို သိရှိစေရန်အတွက် ဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားသည်။
“ရှစ်လေးလုံး ဖြစ်ရပ်ကို ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်ရတဲ့၊ အကျအန မသိရသေးတဲ့ နောင်မျိုးဆက်တွေ နားထောင်ပါ။ ပုံတွေကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့၊ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေ၊ ကိုယ်တိုင်နာကျင် ခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီသမိုင်း၊ ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ စစ်အစိုးရရဲ့ သတင်းစာတွေထဲမှာ မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်ခြင်း၊ လုယက်ဆူပူခြင်း၊ အရေးအခင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကြီးမျိုးစုံ နာမ်နှိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ပုံဖျက်ခံရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ ဒီအရေးတော်ပုံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မလျှော့ပေးနိုင်ဘူး။ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း အရေးတော်ပုံကနေ တစ်ပြားမှ မလျှော့နိုင်ဘူး။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပြောပါတယ်။ အဲဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်ကို ဖုန်းမော်တစ်နှစ်ပတ်လည် ကတည်းကပါ။ တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ အရေးတော်ပုံ တစ်ခုကို တခြားစကားလုံးတွေနဲ့ အစားထိုးပြီး သေးသိမ်သွားအောင် ယုတ်ညံ့သွားအောင် အပြုမခံနိုင်ပါဘူး” ဟု ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားသည်။
ယခုပြုလုပ်သောပွဲသည် မိမိတို့ထက် အရေးတော်ပုံတွင် ကျဆုံးခဲ့သော အညတရ သူရဲကောင်းများကို အထူးတလည် ဂုဏ်ပြုသည့်ပွဲလည်း ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့ ကြုံဆုံခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြည့်စွက်ရေးသားပေးရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောဆိုသည်။
ကျုပ်တသက်လည်း.. အရေးအခင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဝမပြော/မရေးခဲ့ပဲ.. အရေးတော်ပုံလို့သာသုံးနှုံးရေးခဲ့တာ…။
အဲဒီ၈၈ အေ၇းတော်ပုံကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုက.. ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ပါပဲ..။
အာရှမှာ..ကမ္ဘာမှာ စစ်အေးတိုက်ပွဲ(Cold War Era)ကိုချိမ်းခြောက်ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့.. “ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးလူထုတိုက်ပွဲ”ပါ…။
ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုကြီးကြောင့်.. ဆိုရှယ်လစ်/ကွန်ြမူနစ်စနစ်ယိုင်ထွက်သွားပြီး.. စိနပြည်မှာ တီအန်မင်အရေးအခင်း(June 4, 1989)ဖြစ်တယ်..
ကွန်မြူနစ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲပြီး.. ဒီမိုကရေစီရုရှားဖြစ်တယ်..။ (December 1991)
သမိုင်းအမှန်တွေကို ဖျောက်ပစ်လို့မရလို့မရပါဘူး….ဒါပေမယ့် သမိုင်းအမှန်တွေကိုတော့ မျိုးဆက်သစ်တွေသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်…ယနေ့ အသက်၂၅နှစ်အရွယ်လူငယ်အများစု သိတဲ့လူနည်းပါးနေသေးတယ်…လွန်ခဲ့သော ၂၅နှစ် ကဘယ်လိုသွေးတွေနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့သမိုင်းဆိုတာ သိအောင်၊
ကြိုးစားစေချင်တယ်…အဲဒီအချိန်တုံးက အလကားနေရင်းအသေခံဖို့လမ်းပေါ်ထွက်တာမဟုတ်ဘူး၊ကျောင်းသားပြည်သူ ဘယ်လိုစည်းလုံးတယ်၊ညီညွတ်ကြတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်…
မနက်ဖြန် နံနက်(၈း၀၀)၊ တံတားဖြူမှာ ဆုံကြမည်။
၈၈ ဒါ ငါတို့ နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ အရင် အစိုးရ နဲ့ ဘဲ ဆိုင်တယ် ဆိုပြီး လမ်းလွှဲ ချ ဖို့ အကြံ မရှိကြဘူး လားမသိ။
ခဏ လေးသာ သည်းခံ လိုက် လို့ ပြောနေကြမလား။
ကျုပ် ကို မဆဲ ကြနဲ့ နော်။
လက်ရှိ လူတို့ ဘယ်လို မျက်နှာ၊ ဘယ်လို စိတ်ဓာတ် နဲ့ နေနေကြသလဲ တွေးမိလို့။